Wafdi uu hugaaminayo m/weyne Xasan Sheekh oo u dhoofey dalka Ethiopia. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka Wafdi uu hugaaminayo m/weyne Xasan Sheekh oo u dhoofey dalka Ethiopia.
Wafdi uu hugaaminayo m/weyne Xasan Sheekh oo u dhoofey dalka Ethiopia.
Madaxweynaha dawlada federalka soomaaliya iyo wafdi uu hugaaminayo ayaa dalka ka dhoofey iyagoo kusii jeeda xarunta midawga afrika ee Adisababa.
Dawladaha midawga Africa ayaa kulan ku leh xarunta dawladahaasi ay leeyihiin ee ku taal dalka Ethiopia caasimadiisa Adisababa,waxeyna kaga wada hadlaan hadba dhibaatooyinka ugu waaweyn ee qaarada heysta ,iyadoo la filayo in xiligan lagaga wada hadlo dhibaatooyinka ka taagan Konfurta sudan iyo soomaaliya.
M/weyne Xasan Sheekh oo la filayo in uu qudbad ka jeediyo kulanka waqtigan ay dawladaha Afrika ku leeyihiin Adisababa ayaa la filayaa in uu kaga hadlo xaalada dalka soomaaliya uu marayo iyo xukuumada dhawaan uu soo dhisey sida loogu qanacsanyahey.
Maahan markii ugu horeysey ee ay dawladaha midawga Afrika kulmaan hase yeeshee kan ayaa imanaya iyadoo dalal badan oo afrika ah ay ka taaganyihiin qas iyo qalalaase siyaasadeed iyo dagaalo sokeeye.
Previous articleMaxamu’d Maxamed Faarax Nabadoon caan ah oo lagu diley Garoowe.
Next articleCiidamo kawada tirsan kuwa dawlada federalka oo kuwada dagaalamey degmada Wanlaweyn ee gobolka Sh/hoose.